Dowladda Itoobiya Oo Diiday Dhexdhexaadin Ay Afrika Waday – somalilandtoday.com
Dowladda Itoobiya Oo Diiday Dhexdhexaadin Ay Afrika Waday
(SLT-Addis Ababa)-Dowladda Itoobiya ayaa diiday isku day Afrika ay ku dooneysay inay ku dhexdhexaadiso Sabtidii, iyadoo sheegtay in ciidamadeedu ay qabsadeen magaalo kale oo ay uga sii horjeedaan caasimadda mucaaradka ee waqooyiga gobolka Tigray.
Boqolaal, laga yaabee kumanaan, ayaa dhintay in kabadan 30,000 oo qaxooti ahna waxay u qaxeen Suudaan tan iyo dagaalkii 4tii Nofeembar. Dagaalku wuxuu ku faafay meelo ka baxsan Tigreega, oo ciidamadeedu ay gantaallo ku garaaceen gobolka Axmaarada u dhow iyo qaranka Eriteriya, taas oo walaac ka muujisay oo ah dagaal balaadhan iyo kala qaybsanaanta Itoobiyada badan.
Xukuumada Abiy ayaa sheegtay inay dhawaan gaadhi doonto magaalada Mekelle kadib markii ay qaadatay magaalooyin kala duwan oo ku xeeran. Sabtidii, waxay sheegtay in Adigrat, oo qiyaastii 116 km waqooyiga ka xigta Mekelle, ay sidoo kale dhacday.
Eedeymaha dhinacyada oo dhan way adagtahay in la xaqiijiyo maxaa yeelay taleefanada iyo khadka internetka ayaa hawada ka maqnaa tan iyo bilowgii dagaalada iyadoo saxaafada inteeda badan laga saaray.
“Xaaladda waa mid aad u daran,” ayuu yidhi Jens Hesemann, iskuduwaha adeegga badbaadinta ee Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga (UNHCR), kana yimid halka laga gudbo ee Hamdayet wuxuuna codsanayaa gargaar deg-deg ah oo deeq-bixiyeyaasha ah.